त्यो स्पेनिस फ्लू, जसले करोडौं मानिसको ज्यान लियो! | पहिलो बोली
त्यो स्पेनिस फ्लू, जसले करोडौं मानिसको ज्यान लियो!
३५७७ पटक पढिएको
काठमाडौं। यतिबेला कोरोना भाइरसका कारण विश्व आतंकित बनेको छ। चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) दुई महिनको बीचमा विश्वका ६० भन्दा धेरै मुलुकमा फैलिसकेको छ।
बुधबारसम्म करिब ३३ सय मानिसको यो कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भइसकेको छ भने, एक लाखभन्दा धेरै संक्रमित भएका छन्।
तर, पृथ्र्वीमा यसरी कुनै भाइरसको महामारी भएको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि पनि विभिन्न सयममा भाइरसको महामारीले विश्वमा धेरै मानिसहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन्।
सबैभन्दा घातक भाइरसको कुरा गर्दा स्पेनिश फ्लूलाई लिने गरिन्छ। स्पेनिश फ्लूको महामारीबाट बचेका मानिसहरुले लेखेका पत्रहरुले त्यो कहरको दर्दनाक बयान गर्छन्।
बीबीसीमा उल्लेख समाचारअनुसार लन्डन इम्पिरियल वार संग्रालयका यी दस्तावेजहरुको अनुसन्धान गरिरहेकी अनुसन्धानकर्ता हेन्ना मोडस्ली यी दस्तावेजहरुलाई महामारीमा मानिसहरुको अनुभवको झ्याल भन्छिन्।
यस महामारीले बेलायतमा ढाई लाख मानिसको ज्यान लिएको बीबीसीमा उल्लेख छ। संसारभर यो महामारीको चपेटामा परी ५ देखि १० करोड मानिसले ज्यान गुमाएका थिए।
इतिहासकार तथा पत्रकार रिचर्ड कोलियरले यी पत्रहरुलाई संग्रालयमा दिएका थिए। १७०० साँचो कथाका यो संग्रह १९७० को दशकमा बनाइएको थियो। यो ती मानिसहरुको कथा हो जसले पहिलो पटक महामारी देखेका थिए।
ती मध्ये एक काभेन्ट्रीकी ९ वर्षीया बालिकाको सम्झना पनि छन्, जसले दुई दिनको अन्तरालमा ३५ वर्षीया आमा र ७ वर्षीया बहिनी गुमाएकी थिइन्। यी बालिकाले १९७० को दशकमा कोलियरलाई पत्र लेखेकी थिइन्। उनले लेखेकी थिइन्, ‘११ नोभेम्बर १९१८ का दुई दुई अन्तिम संस्कारका दिन मेरो लागि निकै आश्चार्यजनक थियो। त्यो त्यहि दिन थियो, जब पहिलो विश्व युद्ध समाप्त भएको थियो। मलाई सम्झाना छ, जब अन्तिम यात्रा चर्चतर्फ गइरहेको थियो, हरेक स्थानमा घण्टि, साइरन र खुशीको आवाज सुनिरहेको थियो, तर जब मानिसहरु हाम्रो यात्रालाई देख्थे, उनीहरु चुप लाग्थे। यो वास्तावमा एक भयानक पल थियो, हामीलाई थाहा थिएन, हामीभन्दा पछि को मर्नेवाला छ।’
यसलाई भाग्यको क्रूर मोड नै भन्न सकिएला, जब सैनिकहरु युद्धबाट फर्किँदै थिए, तब स्पेनिश फ्लू बेलायतको तटसम्म पुगिसकेको थियो।
लण्डनस्थित क्वीन म्यारी यूनिभर्सिटीकी रिसर्चर मोडस्ली भन्छिन्, ‘युद्धबाट बाँचेका सैनिकहरुको भयानक कथाहरु छन्। उनीहरु जहाजबाट घर फर्किँदै थिए, त्यो बेला उनीहरुले आफ्नो श्रीमतीको मृत्युको पत्र पाए। युद्ध अन्त्येको खुशी र राहतका साथै मृत्यु र पीडाको अवस्था पनि आएको थियो।’
वेलकम लाइब्रेरीका अनुसार महामारीका क्रममा बेलायतको जनसंख्याको एक चौथाई भाग स्पेनिश फ्लूको चपेटामा आएको थियो। र करिब २ लाख २८ हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो।
मोडस्ली भन्छिन्, ‘उपचारका लागि क्म्फरदेखि क्वीनीन र अल्कोहलसम्मको प्रयोग गरिएको थियो। सबैभन्दा राम्रो व्हिस्कीलाई मानिएको थियो। तर केही उत्पादनहरु जस्तै क्रिओसोट र स्ट्रीचनीनको पनि प्रयोग गरिएको थियो। खासमा मानिसहरु बाँच्नका लागि जे पनि गरिरहेका थिए। नर्सिंग एक मात्र यस्तो चिज थियो, जसले वास्तावमै सहयोग गरेको थियो। त्यो समय स्वयंसेवी नर्सहरुको निकै आवश्यकता थियो, किनकी ती मध्ये केही युद्धको मोर्चामा पनि पठाइएको थियो। निश्चित रुपमा जो मानिसहरु सेव गर्थे उनीहरु भाइरसको सम्पर्कमा आउँथे र खबरहरु आए उपचारमा सहयोगी नर्सहरु नै स्पेनिश फ्लूको चपेटामा आए।’
स्पेनिश फ्लू २०, ३० र ४० वर्ष उमेरका मानिसहरुका लागि निकै घातक बन्यो।